Mamiriyoni evashandisi vewebhu vanotsvaka zvinhu zvakawanda paIndaneti zuva nezuva . Vanotarisira kuwana mimwe migumisiro, nekuunganidza zvose zvese zvavanoda nokukurumidza sezvinobvira uye saka kuita bhizimisi ravo ribudirire. Somugumisiro, vanotsvaga mawebsite kuti vaunganidze dhese ravanoda uye vanoichengeta pamakombiyuta avo - projet logiciel libre. Uye imwe yepamusoro yekutsvaga webhu zvishandiso, iyo inokwanisa kubvisa dambudziko mumoto weziso, iScrapy!
Kurapa - Awesome Web Data Extraction Framework
Chirongwa chinhu chinoshamisa web data extraction tool chinogona kushandiswa nevanhu kana mabhizimusi anogona kuwana basa racho pasina nguva . Inobvumira vashandisi kuti vatarise pane zvinyorwa zvemashoko, vachishandisa CSS vasarudzo. Zvirongwa zvepachiyamu ndechegadziriro yePython inopa vashandisi vayo shanduko dzose dzakasarudzwa kuti vapedze basa ravo uye kuwana zvose zvavanoda pasina kushandisa nguva yakawanda. Kunze kwezvo, unogona kuzvichengeta mune dzimwe mafaira pakombiyuta yako.
Vashandisi vepaIndaneti vanofanira kuyeuka kuti Chikoro chinoshamisa chiya chinovabatsira kubvisa zvose zvakakosha, uyewo kufamba mumapeji akakodzera.
Chokutanga pane zvose, unofanira kuisa Python pane yako yekushandisa. Ipapo iwe unogona kungozvitsvaga izvozvi kubva panzvimbo yayo yepamutemo.
Chinhu chinotevera chaunofanira kuita ndechokugadzira chirongwa cheScrapy mushure mekuwana bhuku raunoda kuchengeta. Zvadaro shandisai data yavo yose uye muchengete pane imwe nzvimbo kuti muiwane iyo chero ipi zvayo yamunoda.
Nzira yakanakisisa yekuti iwe uunganidze dhamusi yakawanda neChirongwa chekushandisa ndechekushandisa shanduro yeScrapy. Iwe unogona kushandisa Xpaths kusarudza zvinhu zvakasiyana-siyana kubva pamagwaro e HTML. Kunyanya zvakanyanya, chirwere cheScrapy chinotarisirwa kutsanangura nzira iyo iwe unotevera mazano anokonzerwa nekukamba kuburikidza newebsite. Kunze kweiwo, unogona kubvisa ruzivo rwese rwunoda kubva pamapeji mumasangano akasiyana-siyana eDython data.
Nokushandisa purogiramu yemasikari, unogona kukwanisa chero zvinyorwa zvaunoda. Iwe unongoda kunyora zvipfeko zvekuita kwemajw.org akasiyana-siyana. Uyezve, unoda kunyora kodeji kuti uchinje iyo yakaungana data mumutambo wakarongeka uye uichengetedze kumakombiyuta yako.